Amakamu okucindezela abuyele eYurophu, ngenxa yama-gay. - Gay Shop
Njengabantu abaningi abaphika ukuthi ukuQothulwa Kwesizwe kwenzeka, manje abaphikayo bavela empumalanga yeYurophu bathi amaqembu okuhlushwa ama-gay awakho.
"Abashicileli bamalungelo abantu bahlanganisa zonke izinhlobo zezinto ezingenangqondo ngemali," kusho uMongameli weChechnya uRamzan Kadyrov. I-Chechnya iyinhloko enkulu yaseYurophu yokushushiswa kwama-gay.
Izindaba zamakamu okuhlushwa zaphuma ku-2017. Izitolo zemidiya zaseRussia kanye namaqembu omalungelo esintu aletha leli zwi entshonalanga. E-Chechnya, abezindaba ukulawulwa kukahulumeni nokuphikisana akuvunyelwe, ngakho ukuthola ukuqinisekiswa kuhulumeni akunakwenzeka.
UMengameli uKadyrov wanezela, "Yonke into eyenziwa yizithunywa zangaphandle ezikhokhelwa ama kopecks ambalwa." I-kopeck, eyaziwa kangcono ngokuthi i-ruble, iyinkokhelo e-Chechnya. I-kopeck eyodwa ibaluleke kakhulu kunezinkulungwane ezimbili zase-US.
UMengameli uKadyrov waze wafika ekuphikeleni ubungqingili ngisho noma ekhona esifundeni sakhe. Ulimi lwakhe lwalujwayele kakhulu ukuphika emazweni aseMpumalanga Ephakathi. Uthe, "Uma kwakunabantu abanjalo e-Chechnya, izitho zomthetho zingeke zidingeke ukuba zihlangane nazo ngoba izihlobo zazo zizithumela endaweni ethile lapho kungabuyeli khona."
Ukuphika kwakhe kwahamba kancane kancane ehlobo eledlule lapho ethi, "Uma kukhona ama-gay, bawususe kithi." Ukuhlanza igazi lethu, uma likhona, lithathe. "
Imidiya yaseRussia ithumele izindaba eziningi mayelana nokushushiswa kwama-gay esifundeni. Abantu abambalwa ababalekele endaweni babika ngokuhlukunyezwa ababhekana nakho. Okungenani oyedwa, uMover Eskarkhanov, waxolisa ngokubika kwakhe kokuhlukunyezwa futhi wenqatshelwe ukuthi ungumlingani.
Ngesikhathi ekhululekile kubadeleli baseChechnya, u-Eskarkhanov unomndeni osele. Uhlala eJalimane. "Benze kucace ukuthi uma ngiqhubeka ngikhuluma, bekuyoba nezinkinga, bathi kumele ngiqale ngicabange ngomndeni wami," etshela izintatheli.
Abanye ababalekile futhi abanakho umndeni ukuba babe nokukhathazeka ngokuthi baye banamathele ezindabeni zabo zokuhlushwa nokuhlukunyezwa.